Editorial martsa 2015 | FJKM Amboniloha
Editorial martsa 2015
Izany indray no Lohahevitra hodinihantsika amin’ity volana Martsa ity rehefa azontsika tsara fa mampitombo ny Finoantsika ny Tenin’Andriamanitra.
Ny fizahan-toetra dia ampiasaina entina ilazana ny hetsika atao mba hamantarana ny fahamarinan’ny zavatra na foto-kevitra mahakasika zavatra na olona iray izay sedraina. Ao amin’ny Soratra Masina dia Andriamanitra no mizaha toetra ny olona ([נסה], faire un essai, mettre à l’épreuve) ary ny Finoantsika Mpanaradia Azy no sedraina.
Hoy Mosesy tamin’ny Zanak’Israely, « Aza matahotra ; fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo, ary mba ho eo anatrehan’ny tavanareo ny fahatahorana Azy, mba tsy hanotanareo » (Eks.20, 20). « …ary harendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary hizahako toetra toy ny fizaha toetra ny volamena izy ; hiantso ny Anarako izy, ary Izaho hamaly azy ; Izaho hanao hoe : Oloko izy ary izy hanao hoe : Jehovah no Andriamanitro. » (Zakaria 13, 9) Toy ny mizaha toetra volafotsy na volamena no ataon’Andriamanitra amintsika. Izany hoe, ny hampamirapiratra ny finoantsika sy ny fahatokiantsika Azy Ilay Andriamanintsika mahefa ny zavatra rehetra mandrakariva no tanjona. Ny hampamirapiratra ny Voninahitr’Andriamanitra e !
Sehatra isehoan’ny Fizahana toetra ny finoantsika matetika ny zava-mitranga eo amin’ny fiainantsika manokana na ny ankohonantsika na ny fiarahamonina izay misy antsika na izay ananantsika, toy ny vola aman-karena (aretina, hanoanana, tsy fahampiana isankarazany…). Tena mandalo sedra tokoa isika amin’izao fotoana iainantsika izao, raha tsy hiresaka afa-tsy ny toetr’ andro misy eto Madagasikara fotsiny, izay miteraka fahavoazana maro na ara-tsosialy na ara-toekarena. Tra-boina etsy…traboina ery….very havana, very fananana…Mety mitady ho kivy isika ; kanefa tsarovy fa Fizahan-toetra ny finoantsika io.
Mahereza, Mijoroa hatrany amin’ny fahatokiana an’Andriamanitra Ilay tia antsika ; Tsy mba mamela antsika ho irery Izy amin’izao lalan-tsarotra lalovantsika izao. Tsarovy fa ny fizahan-toetra dia manefy antsika hitombo finoana sy fahalalana be be kokoa an’Andriamanitra ary mahatonga faharetana amin’ny fahatokiana Azy amin’ny zavatra rehetra : tsy mivadika fa mahato ny Teny fikasàny Izy, miahy ny fiainantsika manontolo Izy (manasitrana ny aretintsika, manome izay hanina sahaza ho antsika na ara- nofo na ara-tsaina na ara-panahy). Aza kivy fa apetraho eo ampelatanany amin’ny alalan’ny Vavaka ny zavatra rehetra ….Mazotoa manolo-tena ho Azy, mivavaha ka aza mitsahatra ary aoka hivelona amin’ny Teniny (2Timoty 2,14-21).
Manasa anao handray ny Hafatr’Andriamanitra izay hampitainy aminao amin’ny alalan’ny Teniny mandritra ity volana Martsa ity, hampijoro hatrany ny Finoanao izay mandalo fisedrana … Aoreno ao amin’i Jesoa Ilay efa nandresy izao tontolo izao ny Fanantenanao (Jaona 16, 33). Manana Famonjena atolotra ho an’izay rehetra matoky Azy Izy. Aiza ny finoanao, hoy Jesoa !!!
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 23 mars 2015